Fomba Fiteny Venezoeliana Miavaka, Ravahana Sary Sy Nadika Tamin’ny Teny Anglisy · Global Voices teny Malagasy
Fomba Fiteny Venezoeliana Miavaka, Ravahana Sary Sy Nadika Tamin'ny Teny Anglisy
Voadika ny 06 Jona 2014 8:51 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, 日本語, မြန်မာ, русский, Español
Ao amin'ny bilaogy Venezuelan Sayings, ilay mpandravaka an-tsary Daisy Patton, no mamorona sary maneho ireo fiteny Venezoeliana sy mandika izany amin'ny teny Anglisy. Amin'ny fanehoana an-tsary ataony ny mpamaky no mahita ny fomba fijeriny manokana mikasika ireo ohabolan-drazana voaravaka loko sy hatsikana, ary izany no maneho fomba fijery iray ny kolontsaina ary mikaroka te-hahafantatra iray hafa amin'ny alalan'ny fampiasana fiteny mahazatra.
Tamin'ny lahatsoratra bilaogy, nanazava i Daisy hoe:
Matetika mampiasa fomba fiteny mahazatra avy amin'ny kolontsainy ny vadiko izay Venezoeliana mba hamaritana izay toe-javatra hitanay sy iainanay. Ireo ny fandravahana azy an-tsary nataoko. Hevero ho “más criollo que una arepa” [avy amin'ny faritra kokoa miohatra amin'ny arepa ».
Nikarajia imailaka tamin'i Daisy ihany koa izahay. Tao izy no niresaka zavatra vitsivitsy momba ny fananganana ny bilaoginy sy ireo olana sy fifaliana amin'ny fandikana tsy ny teny ihany fa ny zava-misy manodidina ilay teny (contexte) ihany koa:
Efa ho 8 taona izao no niarahako tamin'ny vadiko, matetika izy te-handika ireo fiteny Venezoeliana amin'ny teny Anglisy, izay mahatonga ahy ho sahiran-tsaina. Noho ny fiavahan'ny fomba fiteny Venozoeliana, nanomboka nanoratra izany (fiteny Venezoeliana izany) aho mba hozaraina amin'ireo namanay; satria tahaka ny hafa mihitsy izy ireny ary misy asa-saina mahay mamoron-javatra mahafinaritra koa. Nivoatra ny tetikasa ankehitriny satria raha niainga avy amin'ireo fomba fitenin'ny vadiko dia efa ahitana ireo soso-kevitra avy amin'ireo Venezoeliana manerantany izany ankehitriny. Hitako ho toy ny tetikasa ifarimbonana izy ankehitriny ka manangona ireo kolontsaina miserana vetivety, ary mahafantatra tsara tokoa aho fa toy ny vahiny mpijery avy aty ivelany.
Sary nahazoan-dalana avy amin'i Daisy Patton.
Mikasika ny asa fandika-teny, hoy i Daisy:
Na teny inona na teny inona, sarotra ny manazava ireo kilalaon-teny, fitenin-jatovo na zavatra mifandraika amin'ny tantara na amin'ny faritra iray manokana, tahaka ny lalao, toerana, na olo-malaza ara-tantara. Matetika rehefa mampiasa fomba fiteny [fehezanteny] ny vadiko Enrique, dia tsy fantatro mihitsy izay tiany ambara raha tsy misy fanazavana (tahaka ny hoe me dieron gato por liebre/ saka no nomena ahy fa tsy bitrodia, ny fomba fiteny sasany kosa somary mazava ihany rehefa mihaino azy ianao (tahaka ny hoe última coca-cola del desierto / Coca farany aty amin'ny tany ngazana).
Mikasika ny fahasamihafana sy ny karazan'ny fehezan-teny, naneho hevitra tahaka izao i Daisy:
Naharay zavatra maro momba ny hamaroana sy ny mampahaliana ny kolontsaina Venezoeliana aho [amin'ny karazan'ireo fomba fiteny fotsiny]. Mety miova kely na miova tanteraka arakaraky ny taonan'olona sy ny faritra ny tena dikan'ireo voambolana apololotra. Marobe ireo olona mifandray amiko no milaza amiko fa na diso ny zavatra lazaiko na mbola tsy reny mihitsy, na iraisana amin'ireo firenena Amerikana-Latina ihany (izay misy dikany tokoa). Amin'ireo lahatsoratra sasany, misy olona mifandray an-tsoratra milaza amiko fa diso ny fomba fiteny na tsy misy mihitsy ary olona dimy hafa kosa mizara izany sy milaza ny fampiasany izany matetika satria heveriny fa mahatsikaiky!
Tsy mitsahatry ny mahazo soso-kevitra ilay mpanakanto an-tsary mba hanohizany amin'ny fandravahana an-tsary sy handika fehezanteny hafa maro. Amin'izany, ankotrihina (mis à jour) matetika ny bilaogy ary mirafitra miandalana ho fandraisana sary miavaka izay nampiasaina sy niely tamin'ny resadresaka avy amin'ny faritra samihafa manerana ny firenena.
Tantaran'ny Fiteny farany
Azia Atsimo 2 herinandro izay